Chrome OS 90 yakanonoka, asi nerutsigiro rwe = Android 11 | Linux Vakapindwa muropa
Chrome OS 90 yakanonoka kune zvimwe zvishandiso, asi nerutsigiro rweiyo Android 11
Sezviri pachena isu hatisi kubhadhara zvakanyanya kune iyi Linux-based operating system. Ini pachangu, handishamiswe, nekuti ini handifarire kwazvo uye ndinofunga kuti vazhinji vevaverengi vedu vanofarira kugoverwa kwakazara kweLinux. Uye ndiyo iyo v89 yeGoogle desktop inoshanda sisitimu zvakaitika kwatiri, uye takawira mune izvo Chrome OS 90 yakanga yatangwa ne tambo paReddit izvo zvinotitaurira nezvekuuya kwayo pane ese anoenderana zvishandiso.
Chrome OS 90 inowanikwa kwemavhiki, asi kwete zvemidziyo yese. Uyu musi weChina akasvika kune vaive vakamumirira, ayo ari IdeaPad Flex 5i Chromebook (13 ″, 5), HP Chromebook x360 14c, HP Pro c640 Chromebook, ASUS Chromebook Flip C436FA, HP Elite c1030 Chromebook / HP Chromebook x360 13c, Acer Chromebook 712 [C871], Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W), Samsung Galaxy Chromebook uye Samsung Galaxy Chromebook 2.
Zvakakwirisa zve Chrome OS 90
Nguva dzakatarwa uye kunonoka padivi, ichi chinyorwa chinotaura nezve kuburitswa, uye kuburitswa kwese kunouya nenhau. Chrome OS 90 inosuma izvi:
Yekutanga yekutsvaga yakavandudzwa. Ikozvino inoratidza zvakare mhedzisiro senge nguva, masvomhu kuverenga kana iyo Stock Market.
Diagnostic App, iyo inoratidza ruzivo rwakadai seCPU uye marongero ekurangarira, kubhadharisa bhatiri uye hutano, tembiricha, uye zvimwe zviyero.
Scan chishandiso, chinowanikwa pane inoenderana maprinta.
Subtitles munguva chaiyo pane chero svikiro ine odhiyo. Inogona kuwanikwa kuburikidza neyekuwanika menyu mune systray kana iyo Chrome OS marongero menyu.
Tsigiro yeApple 11, asi vashandisi vakambozviedza vanoti hazvishande zvakanyanya.
Tichifunga kuti Chrome OS 90 yakasvika muna Kubvumbi, iyo Vazhinji vashandisi vanenge vatoisa vhezheni itsva yeiyo sisitimu inoshanda. Ivo chete vataurwa pamusoro apa vaifanira kumirira zvishoma, asi rinofanira kuwanikwa nhasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome OS 90 yakanonoka kune zvimwe zvishandiso, asi nerutsigiro rweiyo Android 11
Plasma 5.22 beta, ikozvino yavapo, inoti kuonekana neKSysGuard uye inounza kugadzikana uye shanduko shanduko
Guix 1.3 Inosvika neKutanga POWER9 Tsigiro, Zvitsva Zvimiro, uye Zvimwe